Godka dunida ugu dheer. - iftineducation.com
iftineducation.com – Godkan dhulka hoostiisa mara ee la yiraa Gotthard oo dhererkiisu yahay 57 Kilomitir waxaa laga dhisay buuraha Alps hoostooda, waxaana loogu tala galay inuu saxmadda gaadiidka ka qaado waddooyinka dalka Switzerland.
Waxaa uu qayb ka yahay hab isku xiraya tareennada woqooyiga iyo koofurta qaaradda Yurub. Godkan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mucjiso xagga injineeriyada, waxaana Switzerland ay ku guulaysatay inay waqtigii iyo lacagtii loogu tala galay ku dhisto, taas oo ah 12 bilyan oo dollar.
Mashruuca dhismaha godkan oo ah kan adduunka ugu dheer, hoosna ugu qodan, waxaa uu qaatay kudhowaad 20 sano. Switzerland waxay sheegtay inuu casriyeyn doono gaadiidka xamuulka qaada ee qaaradda Yurub.
Alaabooyinka ay hadda waddooyinka ku qaadaan malaayiin baabuur ah sanadkii, waxaa hadda kaddib qaadi doona tareennada.
Godkani waxaa uu dhaafay god dhulka hoostiisa mara waddanka Japan oo dhererkiisu ahaa 53.9 kilomitir, lana yiraahdo Seikan oo hore u ahaa kan adduunka ugu dheer, waxaana uu kaalinta 3aad u riixay dhuunta godka isku xira dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska oo dhererkiisu yahay 50.5 kilomitir.
Hoggaamiyaha Jarmalka, Angela Merkel, madaxweynaha Faransiiska, Francois Hollande iyo Ra’iisal wasaaraha Talyaaniga, Matteo Renzi, ayaa madaxda Switzerland kala qayb galay xafladda weyn ee furitaanka mashruucan.
Image copyrightAFPDhismaha mashruucan waxaa lagu ansixiyay afti laga qaaday dadweynaha Switzerland sanadkii 1992-dii. Heerka dhuuntani waa 46 darajo oo centigrade ah. Injineerradu waxay buuraha hoos u qodeen 2.3 kilomitir, waxayna burburiyeen 73 nooc oo dhagxaan ah, intii hawshaasi socotayna waxaa ku dhintay sagaal qof oo shaqaale ahaa. Waxaana godkaasi laga soo saaray 28m oo ton oo dhagxaan ah.
Waxaa uu hadda isku xirayaa Rotterdam oo Netherlands ah iyo Genoa oo Talyaaniga ah. Marka uu si buuxda u hawl galo bisha December ee sanadkan.
Waqtiga safarka ee magaalaooyinka Zurich iyo Milan saacad ayaa laga jaray, waxayna noqon doontaa laba saacadood iyo 40 daqiiqo.
260 tareennada xamuulka qaada ah iyo 65 tareennada dadku raaco ayaa maalin walba ka gudbi doonaa dhuuntaas safar qaadan doona 17 daqiiqo oo keliya.
Dhuunta waxaa lagu dhisay lacag canshuur ah oo shidaalka lagu kordhiyay iyo canshuurta waddooyinka, waxaana ay dib ugu soo xaroon doontaa muddo toban sano gudahood ah. Bangiga Switzerland waxaa uu sheegay in faa’iidooyinka dhuuntan ay ka mid noqon doonaan alaabooyinka oo sahal isugu-gudba iyo dalxiiska oo sare u kaca.
Ciidamada Mareykanka ay tababareen ee Soomaalida ee lagu magacaabo Danab ayaa dilay Maxamed Maxamuud oo sidoo kale loo yaqaan Dulyadeyn